Who were Bengali, so called Rohingya?: ဘင်္ဂလီအရေး တွေးမိသမျှ
စည်းလုံးခြင်းသည် အင်အား (http://photayokeking.org) ၀က်ဆိုက်မှာ စာရေးဆရာကတော့ အပိုင်း(၃)ပိုင်းခွဲတင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ် ကျနော်ကတော့ တပိုင်းတည်ဖြစ်အောင် ပြည်လည်စုစည်းပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မသီတာထွေးအား မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသော တရားခံ ဘင်္ဂလီ (၃) ဦးကို ရုံးထုတ်လာစဉ်
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး UNHCR အကူအညီဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ခြမ်းမှာ ဖွင့်ထားသော နရပရ ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်များ ဆန္ဒပြနေစဉ်
မောင်တောမြို့ အ၀င် မုဒ်ဦး
အိန္ဒိယက မြန်မာနိူင်ငံထက်စောပြီး လွတ်လပ်ရေးရချိန်မှာ ဘင်္ဂလားဒေသဟာ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန် လက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်တော့ အရှေ့ပါကစ္စတန်ကို ပုန်ကန် ခွဲထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ရှင်မဖြူကျွန်းဟာလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရကတည်းက ဘင်္ဂလားလက်ထဲ ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယ ခွဲချိန်မှာ ဘင်္ဂလီတွေဟာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်ကိုတောင် ပါကစ္စတန်နယ်မြေထဲထည့်ဖို့ လှုပ်ရှားခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အများအပြား ထပ်မံခိုးဝင်လာခဲ့ကြတာကြောင့် အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ၀မ်းတင်လက်ထက်တွင် နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေးနဲ့ တားဆီးခဲ့ရာမှာ ဘင်္ဂလားဘက် ပြန်ပြေးသွားတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကို ကုလသမဂ္ဂအစီအစဉ်နဲ့ ပြန်ပြေးသွားတဲ့ အရေအတွက်ထက် ပိုမိုပြီး လက်ခံပေးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ http://bdcburma.wordpress.com/ မှာ အခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ရူနိူင်ပါတယ်။ ဦးနေဝင်း လက်ထက်မှာပါ။ သို့သော်လည်း ဝင်လာမစဲ တသဲသဲရှိနေခဲ့ပြီး ပြည်မထဲက ရန်ကုန်အထိ ဝင်လာနိူင်ခဲ့ကြတာ ကိုယ်တွေ့မို့ စာရေးသူတောင် လန့်သွားခဲ့မိပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်လည်းမရှိ မြန်မာ စကားလည်း တစ်လုံးမှ မတတ်သူတွေဖြစ်ပြီး အချိန်ကာလအားဖြင့် ရန်ကုန်မှာ စစ်တပ်နဲ့နယက တယက မယက ရယကတို့က ကိုယ့်မိဘပြည်သူလူထုကို ကောင်းကောင်းကြီး နှိပ်စက်နေတဲ့ အချိန်ထဲမှာပါ။ (ဧည့်စာရင်းကို မြန်မာချင်း ခြင်ထောင်လှန်စစ်ပြီး အရံမီးသတ်နဲ့ အလိုတော်ရိ ရပ်ကွက်လူကြီးဆိုသူတွေက မူးရူးအနိူင်ကျင့်နေချိန်မှာပါ။)
မောင်တောမြို့ ပဋိပက္ခအတွင်း ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ တခြမ်းဗဲ့ ဗလီ
If the author read his article himself again, he could even see how bias and hatred towards Muslim is. If generation been living in the area from Rakhaing kings' time, shouldn't they been regard as residents? Have not your so called kind, gentle buddhist monk request the doner what animal they want to eat? There are always opportunitists in every situation, but you should not ignore the long resided local Muslim as foreigner. Name them whatever you want, but they should be the citizens of the country lived for generations. A group of same people have every rights to name themselvesaname regardless of the time. That means they could change their name to something else tomorrow. But they can't change their place of birth and generations lived. For you to understand, let me put it simple, onlyasmall number of people might comes from Bangladesh.
When it comes to educate Muslims, I strongly agree with you on the point not to be extremist but you Buddhist monk should stop promoting hatred towards Muslims as well because Buddha did not reached hatred nor any other religions.